# StayinMyDistrict Downtown Coos Bay Historic Heritage House - I-Airbnb
# StayinMyDistrict Downtown Coos Bay Historic Heritage House
#StayinMyDistrict Downtown Coos Bay! Indawo yokuhlala enhle nethule eduze kwedolobha laseCoos Bay Shopping, Dining & Entertainment. (amabhulokhi angu-6-8 ibanga lokuhamba). Leli gumbi lokulala eli-1- indlu yokugezela engu-1 ilala kufika ku-(4). Le ndawo yokuhlala yangasese enezibuyekezo nezinsiza kulo lonke ihlinzeka ngendawo yokuhlala enethezekile e-Coos Bay. Ifenisha ngokugcwele, Ikhebula ne-WIFI, ikhishi eligcwele, i-WD nendawo yokupaka YAMAHHALA. Indawo yangaphandle & Nenja Kunobungane ngokugunyazwa kwangaphambili.
Gcoba kusofa onethezekile ngengubo nencwadi, noma ubambe imibukiso yakho eyintandokazi. Usofa ugoqeka ube ngumbhede ogcwele izivakashi ezengeziwe. Isikrini esikhulu samafulethi angama-intshi angu-50 i-Smart TV, esiphelele ne-Netflix, i-Amazon, ikhebula ne-WIFI ukuze uqedele izidingo!
Inkosi enethezekile enombhede olingana nenkosi. Amalineni ekhwalithi anikeziwe kanye nesikhala esikhulu sekhabethe lokugcina izinto zomuntu siqu zezivakashi.
Jabulela ikhofi lakho lasekuseni noma ingilazi yewayini endaweni yokuhlala eyimfihlo kuvulandi ongemuva ovalekile. Kukhona futhi i-patio evamile yangemuva ene-propane BBQ kanye nezihlalo ezibheke ngemuva kwendlu.
Iwasha egcwele usayizi ogcwele kanye nesomisi ihlinzekwa endaweni ejwayelekile yokuwasha. Ilondolo liyi-coin-op futhi lamukela ukheshi noma ikhadi.
(1) Indawo yokupaka YAMAHHALA iyatholakala endaweni yokupaka engemuva. Ukupaka emgwaqeni AKUVUMELEKILE phambi kwezakhiwo ezingomakhelwane futhi iDolobha liyazikhipha izingcaphuno.